muraayad wax laga PC in TV | Chromecast Casting Chrome RIGA
Muraayad wax walba oo aad PC in Your TV
Daawashada telefishinka ayaa si wayn bedelay sanadihii la soo dhaafay, ka kaliya daawashada aad channel analogga deegaanka, in daraasiin channels, hoorto iyo hadda aad muraayad kartaa wax walba oo aad PC aad TV. Waxaa uu ahaa siyaabo badan oo ku saabsan sida mid ka mid ah buugii karaa PC in TV. Mid ka mid ah siyaabaha ugu da'da weyn ayaa la isticmaalo HDMI in aad HDTV. In kastoo waxa uu ka shaqeeyay si fiican u dad badan, ay khasaaro ugu weyn waxay ahayd in meesha aad PC ayaa go'aan ka gaaraya dhererka cable HDMI ah. Maanta oo dhan bedelaa awood u leh inay buugii PC in TV wirelessly iyada oo tiro ka mid ah qalabka, mid ka mid ah taas oo ah Google Chromecast suuragelinayo in aad Mirror screen PC in TV meel kasta oo tallaabooyinka fudud in la raaco.
Google Chromecast ayaa lagu qiimeeyaa mid ka mid ah qalabka ugu sareeya inay wirelessly buugii PC in TV oo xiiso leh sababtoo ah qaababka ay dad badan oo ay ka mid yihiin, awoodda ay u sii qulquli videos online, sawiro iyo music aad television adiga oo isticmaaleya isticmaale PC laakiin kiniin ah iyo / ama casriga ah ma aha oo kaliya, ay taageerto dhowr ah oo Chine in ka mid ah YouTube, Netflix, HBO Go, Google Play Movies iyo Music, VEVO, ESPN, Pandora iyo Plex, iyo set fudud ilaa in aan hoos ku wada hadlaan;
Ridaya Chrome RIGA
Tallaabada koowaad waa in la soo dajiyo codsiga Chromecast ah oo laga heli karo halkan: https://cast.google.com/chromecast/setup/ Click ee "Google Kabka" button in chrome Mirror aad tahay tab ah,
On button in, waxay muujin doonaa haddii aad haysato in ka badan hal Chromecast aad network, markaas ka dib waxaad u baahan doontaa in ay doortaan Chromecast ka menu in dropdown doono iyo tab Chrome muujiyaan doontaa TV.
Si aad u joojiso, waxaad riixi kartaa batoonka tuuraan, ka dibna dooro "Jooji shubay".
On button tuuraan, waxaad riixi kartaa "tuur Tab tan" The Mirror tab kale.
Inkasta oo hawlgalkan waa mid aad u fudud, waxaa laga yaabaa in aad hesho natiijo kala duwan, inkastoo ay u shaqayso la taaban karo si fiican.
Files Video la huleeshay karaa Google Chrome tab.
Si loo kordhiyo waayo-aragnimo marka hoorto video ah, waxaad dooran kartaa screen-buuxa ah iyo qalabka wax soo saarka sidoo kale buuxin doonaa shaashadda oo dhan. . Waxa kale oo aad la yareeyo karaa tab ee Seme
Waxa kale oo aad ka heli karo, in qaar ka mid ah qaabab video ma taageersana, in la hadlo karaa iyada oo ku ridaya screen oo idil, tallaabooyinka ah oo aan hoos ku qor,
Mar kale button tuuraan, waxaa jira arrow yar oo ku geeska sare ee midigta halka aad ku arki fursadaha kale.
Ridaya maanku filaayo in audio
Ka dib markii ay talaabooyin aan kor ku xusan, waxad ogaatay in dhawaaqa la soo saaray ka qalab il, kuwaas oo waayo-aragnimo u noqon karaa mid aan sida xiiso leh. "Tuur tab this (filaayo in audio)" furfuraya in dhibaato yar. Codka waxaa Seme in qalabka wax soo saarka aad ku siinaya tayo ah ka sii fiican.
Codka waxaa gacanta ku saabsan app / webpage / TV, aad mugga PC noqdo aan waxtar lahayn. Button ayaa carrab aad internetka waa waxa aad u baahan doontaa in aad xidhi audio ka qalab aad, sida kor ku cad,
"tuur screen oo dhan" caawin doontaa in aad muraayad wax ka badan hal tab ama desktop oo idil.
Ridaya aad desktop
Waxaa lagu tilmaamay "tijaabo" sida ay tahay feature beta ah laakiin waxa ay si fiican u shaqeyn doono.
Waxaad u baahan doontaa in ay isticmaalaan "Qaraarka Screen" doorasho on desktop. Tani waxay aad ka heli by xaq gujinaya desktop-ka.
On guddiga xalinta, dabadeedna waxaad dooran kartaa TV sida aad bandhigay labaad ama xitaa saddexaad.
Tani waxay keenaysaa in dib cable HDMI ka xaddida meesha PC inkastoo siinta wax soo saarka kaamil ah.
Mirroring aad screen oo dhan u oggolaadaan waa in mid ka mid ah inuu u dhaqaaqo ay PC in meel kasta oo ay doonayaan laakiin weli ilaaliyaan tayada.
Marka aad doorato in aad muraayad / aad TV tuuray, waxaad arki doontaa shaashad digniin soo bandhigay. Waxaad u baahan doontaa in guji "Haa". (Sare)
Ka dib markii aad screen waxaa soo bandhigay qalab wax soo saarka, aad PC wuxuu muujin doonaa bar yar oo gacanta kaas oo noqon doona meesha ugu hooseysa iyo awoodo in lagu jiido in meel kasta oo shaashadda ama xataa qarinin adigoo gujinaya "Qari".
Ridaya had iyo jeer lagu joojin karo adigoo gujinaya ku tuur, ka dibna "Jooji Casting".
Si aad u hesho video tayo ah ka sii fiican, waxaad riixi kartaa "tuur youtube.com" dhibic ka hoos menu.
Adeeggan waxaa la samayn karaa adeegyada kale sida Netflix iyo waa ku weyn yahay, sababtoo ah waxaa si toos ah durdurro leh in aad Chromecast ka router, Kordhiyey tayada by baabi'inta factor computer ee habka geeyo.
Ridaya ama mirroring waa adeeg weyn ma aha oo kaliya la daawado guriga, laakiin tan iyo bandhigyo shaqada ama xataa college, ama marka aad rabto in aad aragto ama in webpage tusayo. Waxa kale oo laga yaabaa tayo leh sida xira PC si toos ah u aad TV laakiin PC fiican waa in aad siin tayo leh la taaban karo oo wanaagsan.
> Resource > Emulator > Sida loo Mirror Wax ka PC in TV